Palacio del Infantado - Alọ eze nwere ọtụtụ ihe nzuzo na Guadalajara | Njem zuru oke
Oku Obí eze Ọ bụ obí eze, dị ka aha ya na-egosi, na nkọwa nke ebe e wusiri ike na nwere Elizabethan Gothic style. A na-akpọ ya yana ịbụ akụkụ nke ụdị nke okpueze Castile. Otu ozi ọzọ iji nwee ọmarịcha ịma mma dị na Guadalajara.
Ewu ya bidoro na ngwụcha narị afọ nke iri na ise, site n'usoro nke Íñigo López de Mendoza. Palacio del Infantado kwuru na ọ pụrụ iche n'ụdị ya mgbe ndị ode akwụkwọ chọrọ ịkọwa ọrụ dị ka nke a. Ma akụkụ nke facade na ihe niile anyị ga-ahụ n’ime, agaghị akwụsị ịtụ anyị n’anya.
1 Akụkọ banyere Infantado Obí
2 Nleta na Palacio del Infantado
2.1 Na facade
2.2 Ihe mkpuchi
2.3 Central Patio ma ọ bụ Patio de los Leones
2.4 Ubi ahụ
2.5 Ime nke obí eze
3 Shcedules na ahịa
Akụkọ banyere Infantado Obí
Palacelọ eze a dị na Plaza de España, ebe ụlọ ndị isi ezinụlọ dị. Ma mgbe oge ụfọdụ gachara, Íñigo López de Mendoza kwaturu ha iji rụọ ụlọ ọhụrụ. Na nke mbụ, a hụrụ facade ahụ, nke 1483 mechara. Mgbe ahụ, owuwu nke patio wee bịa na n'ikpeazụ, enwere ike ịnwe ekele maka usoro ya. Na narị afọ nke XNUMX ọ mere ebe a, agbamakwụkwọ ahụ dị n'etiti Philip nke Abụọ na Isabel de Valois. Afọ ole na ole ka e mesịrị, ụfọdụ mgbanwe malitere: Emeghere windo ọhụrụ, dozie ụlọ elu nke ụlọ nzukọ ahụ ma tinyekwa ogige akụkọ ifo.
Mgbe ezinụlọ Mendoza ga-ahapụ Guadalajara, mgbe ahụ, eze ahụ hapụrụ n'enweghị ndị ọbịa. N'ezie, na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, e rere ụfọdụ akụkụ ya na ndị isi obodo. Otu n'ime ojiji ọ nwere mgbe ire ere a dị kọleji maka ụmụ mgbei nke nne na nna agha. N'ezie, n'etiti agha obodo nke 1936, a wakporo Palacio del Infantado n'ụzọ siri ike. N'ime afọ iri isii ka enyere ya ọzọ, mana ọ bụ eziokwu na ihe furu efu n'oge agha ahụ n'agbanyeghị na ọ dị ka ọ dịtụbeghị mbụ, ekwuru na ụfọdụ ịma mma alaghachikwaghị ya. Taa, ekwesiri ikwu na ọ bụ isi ụlọ ọrụ nke ebe ngosi ihe mgbe ochie.
Nleta na Palacio del Infantado
Ọ bụrụ na anyị ga-akọwa ụdị ya, enwere ike ịsị na ọ nwere nkọwa gothic, dị ka ọ na-eme na akụkụ nke mbara ihu. Ma na facade nwekwara brushstrokes nke Ihe nketa Moorish, ruo na nka Mudejar ma rapara na Elizabethan Gothic nke anyi kwurula. N'ihi nke a, akụkụ ọ bụla nke mere nleta na ebe a ga-ahapụ anyị n'akụkụ kachasị iche.
Mgbe anyị hụrụ facade anyị ga-ekwu maka ya nka gothic nka. Ọ bụ ụdị nke mepere na Europe na njedebe oge. Na facade a, ụfọdụ iberibe dị ka diamond dị ka nke gosipụtara ma ọ bụ pụta na-apụta. Ma ọ bụrụ na anyị elelie anya elu, anyị na-ahụ na mbara ihu ahụ yiri ka ọ nabatara anyị. Iji banye n'ọnụ ụzọ isi, anyị ga-eme ya n'akụkụ a. Ma atụla anya ịnwe ọnụ ụzọ echebere nke ọma, mana ị ga-ahụ ya n'akụkụ aka ekpe. Façade a bụ limestone nke e wetara site na mpaghara karịrị kilomita 50 site na ebe a.
Fata ahụ kwesịkwara ka anyị lebara anya, dị ka ọ dị na ndị ọzọ nke obí eze. Nwere ọtụtụ nkọwa nke ụlọ ndị ọzọ nke XNUMXth narị afọ. Ọnụ ụzọ dị n’etiti ogidi abụọ. O nwere njiko na onu ogugu di iche iche tinyere ota, nke nke Mendoza, nke apuru ihu dika ndi nwoke abuo ya.
Central Patio ma ọ bụ Patio de los Leones
Ọ nwere akụkụ anọ nwere akụkụ anọ ma nwee arches abụọ. Ebe ọ bụ na ọ mebere ya veranda arched, ma na akụkụ ala ya ma na akụkụ elu ya, nke dịkwa nnọọ yiri. N'ezie, a na-akwado veranda ahụ site na usoro nke otu ogidi na ndị a sitere na Tuscan. Ihe ngosi nke otu ezinụlọ Mendoza bụ ọdụm ma a na-egosipụtakwa ha ebe ahụ. N'ebe a, ị nwekwara ike ịhụ ọta yana akwụkwọ ozi na Gothic nke na-akọwa akụkọ ihe mere eme nke ụlọ eze dị otú ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị iji chọọ ebe ndị a mma nnukwu ubiỌ dị ka iwu dara iwu ebe a. N'ụzọ nke a, otu onye nwere ike ịhụ ọzọ nke ebe-enye ya oké mma na site na ebe anyị nwere ike ịghọta ihe niile nkọwa ndị ọzọ mfe.
Ime nke obí eze
N'ime anyị na-ahụ Guadalajara Museum. Ebe ọ bụ na ọ bụ onye a bikwa nnukwu akụkụ nke obí eze ahụ. Ebe a na-edobe ihe ngosi nwa oge, ọ bụ ụlọ nke duke. A ka nwere ụfọdụ frescoes malitere na narị afọ nke XNUMX. Nakwa na ọlaọcha dị ala ị nwere ike ịhụ eserese dị iche iche iji tinyekwuo nka nke ụnyaahụ na mgbe niile.
Shcedules na ahịa
Ekwesịrị ikwu ya Rancezọ mbata na Patio de los Leones bụ n'efu. Ya mere, site na Tuesday ruo Sunday ị nwere ike ịnweta ya, malite na 9: 00 am na n'ehihie ruo elekere asatọ nke ụtụtụ. Nwere ike ịbanye ịhụ naanị akụkụ a ma ọ bụ nọrọ ma nwee ọnụ ebe ngosi ihe mgbe ochie. N'ezie, ọ bara uru na ọ bụ na ị kwụrụ 20 euro maka ya. A ga-emechi ya na Mọnde ma a ga-emechikwa ebe a na-edebe ihe ngosi nka n’ehihie Sọnde. Buru n'uche na na Christmasbọchị Krismas, Disemba 00, Ezi Friday ma ọ bụ Mee 3, a ga-emechikwa ya. Tụkwasị na nke a, ị ga-eburu n'uche ụbọchị ndị ọzọ nke ememme mpaghara dịka September 31.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Obí eze
Ihe ị ga-ahụ na Trujillo